ရိုးသားပျော်ရွှင်တဲ. ဘ၀အိမ်ကလေးတည်ဆောက်ချင်တယ် ~ SAI SENG SERK
Home » POLITICALSCIENCE » ရိုးသားပျော်ရွှင်တဲ. ဘ၀အိမ်ကလေးတည်ဆောက်ချင်တယ်
လူများလို တိုက်နဲ.ကားနဲ. မနေရရင်လဲ ကျေနပ်ပါတယ် ရွှေငွေမရှိလဲ တစ်နေ.ရှာတစ် နေ.စားရရင်လဲ ကျေနပ်ပါတယ် ငွေများများရှိရင် စိတ်ဆင်းရဲရမယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ရိုးရှင်းတဲ.ဘ၀နဲ. အေးချမ်းတဲ. ဒီအိမ်ကလေးလိုမျိုးနေရရင်ကျေနပ်ပါပြီ။ပိုက်ဆံရှိချင်ငွေရှိချင်ရင်တော.ဘယ်တော.မှ စိတ်မချမ်းသာပါဘူး။တစ်နေ.ပြီးတစ်နေ.စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲ ဝေဒနာအမျိုးပေါင်းများနဲ.ခံစားရတယ်။ဒီလိုအိမ်ကလေးနဲ. တောထဲသွား
ပြီး ပာင်းသီးပာင်းရွက်ရှာစားမယ် အေးချမ်းတဲ. ဘ၀တစ်ခုကိုပဲလိုချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှာ စီးပွားရေး လုပ်တုန်းက လူတိုင်းလူတိုင်းပဲ လောဘ ကြီးပွားလိုစိတ်ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ. အဲစိတ်တွေပာာ ကိုယ်.ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး ဒုက္ခပေးတာပါ။အဲကြောင်.အလုပ်ကိုမလုပ်တော.ပဲ လူမျိုးအတွက် လူအများအတွက်ထမ်းဆောင်ပြီး ဘယ်လိုပဲနေရနေရပါစေ စိတ်ချမ်းသာ ရရင်ပြီးပါပြီ။တိုက်တွေ ကားတွေ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေါ.ပေါ. စိတ်မချမ်းသာရရင် လူဖြစ်ရတာ လူများထက်တော. အပေါ်စီးမှာနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ. စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာ ကိုယ်.ထက်တော. မသာတော.ပါဘူး။ချမ်းသာဖို.မလိုပါဘူး စိတ်ချမ်းသာဖို.ပဲလိုတာပါ။ဒါကလဲ ကျွန်တော်.အယူအဆမူပါလူတစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်ခံယူဆချက်ခြင်းမတူပါဘူး။လူတွေကပြောပြောပါတယ် ငွေရှိရင် အရာရာတိုင်းမှာ လုပ်ချင်သလို နေချင်သလိုနေလို.ရတယ်လို.ပြောပါတယ် ပာုတ်ပါတယ်ဒါပေ
မဲ ငွေမရှိရင်လဲ ကိုယ်.ဘ၀နဲ. ကိုယ်နေချင်သလိုနေလို.ရသပဲ ကိုယ်.ကိုယ်ကို တန်ဖိုးနေတတ်ရင်ပြီးပါပြီ။ဘယ်လောက်ပဲ မြို.ကြီးမှာ ပျော်တယ်လို.ပြောနေပါစေတကယ်
နှိုင်းယှဉ်ကြီးရင် တော.ထက်တော. မမိပါဘူး။ဒါကြောင်. ဘာမှမရှိချင်ရင်နေပါစေ ဒီလိုဘ၀မျိုး ဒီလိုအိမ်မျိုးနေရရင် စိတ်အချမ်းသာဆုံးပဲ။ဒါပေမဲ. ကိုယ်.လူမျိုးအတွက်ကောင်းရာကောင်းကျိုးလုပ်ပေးဖို.တော.မမေ.ပါနဲ.နော်။ဒီအလုပ်သည် ငွေထက်တန်
ဖိုးရှိပါတယ်။အဲကြောင်. အဓိကက စိတ်ချမ်းသာဖို.ပါပဲ ကျွန်တော်မြင်တွေ.တိုင်း ချမ်းသာတဲ.လူတွေက အရာရာပျော်ရွှင်ပြည်.စုကြတယ်လို.ထင်တာ တကယ်လေ.လာကြည်.တော. လူတွေပာာ တစ်ခုမပာုတ် တစ်ခုတော. အားနည်းချက်ဆိုတာရှိကြပါတယ်။
Photo: Once uponatime loi tai leng view picture